एक भारतीय ट्याग गरिएको "खेल र साहसिक" को न्यूज ब्लग - THE INDIAN FACE
Things चीजहरू तपाईंले प्याडल सर्फको बारेमा जान्नुपर्दछ
गर्मी को साथ, समुद्री तट को लागी इच्छा अस्वीकार गर्न मिल्दैन! यो हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय पानी खेलहरू मध्ये एकले प्रदर्शन गरेको छ प्याडल सर्फ, एउटा खेल यति बहुमुखी कि यसले तपाईंलाई तालको शान्त हिंड्ने सम्भावना दिन्छ सबैभन्दा आश्चर्यजनक चालहरू गर्न, तपाईंको प्याडलको साथ समुद्रमा छालहरू समात्दै।
१० चीजहरू जुन तपाईंले सर्फस्केटका बारे जान्नुपर्दछ
सर्फस्केटका बारे तपाईलाई जान्नु पर्ने १० चीज पत्ता लगाउनुहोस्! यसको उत्पत्तिबाट र जुन मुख्य सर्फस्केट ब्रान्डहरू हुन्, कसरी तपाईं आफ्नो बोर्डलाई आफ्नो आवश्यकताहरू अनुरूप छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नछुटाउ!
विन्डसर्फिing: सबैका लागि खेल
के तपाईं हावालाई नियन्त्रण गर्न हिम्मत गर्नुहुन्छ? विन्डसर्फिing, यो अद्भुत खेल जहाँ विन्डसर्फर, पाल र बोर्ड सबै भन्दा अविश्वसनीय एक्रोब्याटिक्स गर्न को लागी एक भयो। यही कारणले गर्दा आज हाम्रो लेखमा हामीले तपाईंले १० थोरै चीजहरू चयन गरेको छु जुन तपाईंलाई यो बारे जान्नुपर्दछ windsurf, तपाइँ खुशी हुन र हुन सक्छ हाम्रो अर्को ओलम्पिक च्याम्पियन बन्न।
फिंगरस्केटको विशेष संसार पत्ता लगाउनुहोस्
के तपाईंले कुनै पनि सुन्नुभएको छ? फिंगरस्केट? स्केटबोर्डि Theको विश्वको कुनै सीमा छैन र यो यस खास खेलले प्रदर्शन गरेको छ तपाइँलाई केवल तपाइँको औंलाहरू र लघु बोर्ड चाहिन्छ। हामी तपाईंलाई यस बारे सबै विवरण छोडछौं फिंगरस्केट, यसलाई जान्नुहोस् र यसलाई अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्!
स्पेनमा para प्याराडाइसियाल समुद्री किनारहरू सर्फिंगका लागि उत्तम
यो यात्रा गर्न आवश्यक छैन यदि तपाईंले खोजिरहनु भएको ठूला छालहरू, प्राय: लुकेका समुद्र तटहरू र परिदृश्यहरू जुन तपाईंले कल्पना नगर्नु भएको स्थानहरूमा टेलिपोर्ट गर्दछ। हामी तपाईंलाई प्राकृतिक विविधताका साथ unique अद्वितीय समुद्री तटहरू देखाउँदछौं जसले तपाईंलाई प्याराडाइसियाल गन्तव्यहरू प्रदान गर्दछ, जहाँ विश्वका सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सर्फरहरूले अन्वेषण गरेका छन् र पुष्टि गरेका छन् कि सर्फरको स्वर्ग स्पेनसँग मिल्दोजुल्दो छ।
१० चीजहरू तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यदि तपाई डाइभिंगबाट सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने
समुद्रको विशालताको सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण साथ साथै रमाईलो पनि हुन सक्छ। डाइभिंग एक बहुमुखी गतिविधि भएको छ जसले दुबै एमेच्योरहरू र पेशेवरहरूलाई समुन्द्रको फेदमा लुकेका चीजहरू पत्ता लगाउँदछ। यदि तपाइँ यस खेलमा आफैलाई डुबाउनको लागि विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाइँलाई मनमा राख्नुपर्ने सबै कुरा बताउनेछौं!
प्रायद्वीपमा best उत्तम स्नोपार्कहरू तपाईंको स्की चश्माहरू बाहिर निकाल्नुहोस्!
स्पेन र एन्डोरासँग दर्जनौं स्नोपार्कहरू र सबै स्वादका लागि फ्रीरीड क्षेत्रहरू छन् ... निस्सन्देह टीe हजारौं कारखाना, जम्प, pirouettes र डाउनराइटहरू यसको विभिन्न स्टेशनहरूको लागि पर्खिरहेका छन्। के तपाईंले पहिले नै आफ्नो प्रविधिलाई परिपक्व बनाउँदै हिजपार्कमा अनौंठो पिरुएट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ हामी तपाईंलाई प्रायद्वीपमा पाँच उत्कृष्ट स्नोपार्कहरू बताउँछौं ताकि तपाईं नोट लिनुहोस्!
सब भन्दा प्रसिद्ध अल्ट्रा ट्रेल रेस!
तपाईं ट्रेल दौड र साहसिक खेल को एक प्रेमी हुनुहुन्छ? विश्वभरि ट्रेल्समा लामो दूरी पछाडिको दौड पछाडि पछाडिको धागोले कभर गरिएको छ, र यस पटक हामी सबैलाई चिन्ने भेला भएका छौं, तर केहि सब भन्दा रमाईलो, गाह्रो र सनकी पनि। पढ्नुहोस् र विश्वमा सब भन्दा प्रसिद्ध र माग गरिएको ट्रेल रन रेस पत्ता लगाउनुहोस्!
हिमालले हामीलाई यति धेरै प्रस्ताव गर्छ कि हामीले त्यसलाई उस्तै समान सम्मान गर्नुपर्दछ, ताकि हामी त्यस स्थानमा रहन सक्दछौं जहाँ हामी पुग्न सक्दछौं र साँचो त्यहाँ स्वतन्त्र हुन सक्दछौं जुन हामी उनीहरू प्रवेश गर्दा खोज्छौं। तपाइँको मनपर्ने खेल र पहाड के हो? यदि तपाईंले अझै पहाडी जीवन र साहसिक खेलकुदलाई मौका दिनुभएन भने, अबदेखि पर्खनुहोस्! तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि निराश हुनेछैन ...
प्रकृतिले २०२१ मा पहाडहरूलाई निम्तो दिन्छ! र कुरा यो हो कि हामी खेलकुदलाई माया गर्छौं, विशेष गरी यदि यो पहाडहरूमा नै हो भने! त्यहाँ खेल को एक महान विविधता को साथ तपाईं त्यो एड्रेनालाईन पाउन सक्नुहुन्छ, र चरम को लागी तपाईंको लत पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ? तपाईं यी मध्ये कुन अभ्यास गर्नुहुन्छ? माउन्टेन खेलले हामीलाई ल्याउने विशालताको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस्!
जे होस्, २०२० ले हामीलाई हाम्रा सबै मनपर्ने खेलकुद घटनाहरू गुमाएको छ, यो २०२१ हामी ब्याट्री चार्जमा जाँदैछौं र ठूलो उत्सव र खेलकुद घटनाहरूको मिति कहिले हुन्छ भनेर जान्न हामी उत्साहित छौं। यहाँ हामी तपाईंलाई छोड्दछौं जुन हामीलाई थाहा छ यो २०२१ आउँदैछ!
पोखरामा प्याराग्लाइडिंग: मध्य नेपाल माथि उडान
यदि तपाईं प्याराग्लाइडिंगको सोचमा हुनुहुन्छ भने, पोखरा यसलाई गर्नको लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो। यो शहर, "अन्नपूर्णाको प्रवेशद्वार" पनि भनिन्छ (हिमालय हुँदै लोकप्रिय मार्ग), मध्य नेपालको फेवा तालको किनारमा भेटिन्छ, जहाँ सारंगकोटको निकटता र तालको सम्बन्धमा उचाइ। यसलाई प्याराग्लाइडिंगको लागि आदर्श क्षेत्र बनाउनुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो चलिरहेको चश्मा!
अपरिहार्य जब तपाइँ रनिंग र ट्रेकिंगको अभ्यास गर्नुहुन्छ। आउटडोर खेलहरू शरीर र आत्माको लागि धेरै स्वतन्त्र छन्। उनीहरूले हामीलाई स्वतन्त्रताको भावना दिए जुन तपाई घरभित्र पस्न सक्नुहुन्न। यस प्रकारका बाहिरी क्रियाकलापहरूको लागि केवल कुनै जोडी सनग्लास उपयुक्त छैन, गुणस्तरीय खेल चश्मा लगाउनु उत्तम हुन्छ जुन हाम्रो अनुहारमा राम्रोसँग फिट हुन्छ र हामीले बनाउने कुनै चाल भन्दा पहिले नै रहन्छ।
१० चीजहरू जुन तपाईले पर्वतारोहण वा पर्वतारोहणको बारेमा थाहा पाउनुपर्दछ
El पहाड चढाई यो एक खेल अभ्यास हो जुन माथि पहाडहरूको आरोहण र तल समावेश गर्दछ, जसमा कौशल, ज्ञान र प्रविधिको श्रृंखला समावेश हुन्छ जुन शिखर सम्मेलनको उच्चतम बिन्दुमा पुग्नु हो। पर्वतारोहण यसको विशिष्टताको आधारमा एक धेरै व्यापक शारीरिक अनुशासनको रूपमा खडा छ, र जुन खेल समुदाय र आम जनताबाट उच्च मान्यता हो। यस अविश्वसनीय अनुशासनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्!
सबैभन्दा अविश्वसनीय हिउँ खेल भिडियोहरूको संकलन
हिउँ, हिउँ र अधिक हिउँ! तपाईं चरम खेल र साहसिक को एक प्रेमी हुनुहुन्छ? In The Indian Face हामी तपाइँलाई जाडोका खेल भिडियोहरूको एक संग्रह ल्याउँदछौं जसले तपाईंलाई निश्चित रूपमा चुपचाप छोड्नेछ। यदि तपाईं यस बर्षका सब भन्दा आश्चर्यजनक स्टन्टहरू, डाउनराइटहरू र पागल चीजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् र आफूलाई एड्रेनालाईनको यस स्तरको साथ आश्चर्यचकित गर्नुहोस्।
चिसो बिना जाडोको खेल अभ्यास गर्न उत्तम ग्याजेटहरू
चिसो जस्तो केही बाहिरी तत्त्वहरूको कारण हिउँमा खेल अभ्यास गर्न आउँदा धेरै पटक हामी अलिक बढी अल्छी महसुस गर्दछौं। यस वर्ष यसैले तपाईलाई केही पनि रोक्न सक्दैन The Indian Face हामीले तपाईलाई सुझावहरूको एक श्रृंखला ल्याउने निर्णय गरेका छौं, जसले तपाईंलाई चिसोको चिन्ता नगरिकन धेरै नै हिउँ बनाउन मद्दत गर्दछ। हामीसँग कार्यका लागि तयार हुनुहोस्!